HIVE DADAN: SIDA LOO SAMEEYO QAABEYNTA SHINNIDA LEH GACMAHOODA - BEEKEEPING
Ku dhawaad ​​dhammaan beeraleyda hiwaayadda ah waxay isticmaalaan naqshadaha rugta la siiyey ama isbedelka. Magaca guriga shinni wuxuu ahaa sharaf leh Charles Dadan -Beerka Faransiiska, kuwaas oo isticmaalaya horumarin horumarineed waqtigiisii, waxay soo bandhigtay dhismaha hal rug jireed oo leh tiro balaadhan oo qotodheer 11 tiro iyo dukaamo badan oo sare. Abaalgudka guuleystey wuxuu bilaabay inuu isticmaalo beera beereedyada yurub.
Swiss Blatt ayaa kor u qaaday tirada muraayadaha ilaa 12 iyo dhismaha shinni ahaaneed dabiiciga ah ee beeska iyo ilmo-galeenka. Qaybta Dadan-Blatt waxaa loo cusbooneysiiyey noocyo cusub oo casri ah oo ah beekeeper kale - Edward Bertrand.
Qeexida guriga Dadanovsky for bees
Fursad, moodooyinka casriga ah waxaa lagu magacaabaa "rugta Dadan" ama si fudud "dadan." Looma isticmaalo wax soo saarka warshadeed ee malab, laakiin kuwa jecel waxay siinayaan doorbid, qadar yar oo ka mid ah qaabka kiis-keli ah, oo leh faa'iido muhiim ah: kordhinta dukaamada khaas ah ayaa loo isticmaalaa kaydinta kaydka malabka. Waxay yihiin nalal iyo raaxo leh, labalaaba xajmiga kiiska.
Waa muhiim! Faa'iidada kale ee muhiimka ah waa awoodda loo leeyahay in lagu soo saaro qaabka malab, halkii laga beddeli lahaa jirka. Beekeeper wuxuu awood u leeyahay in uu la qabsado shaqada keligiis, taas oo muujinaysa raaxo la'aan.
Mabda'a la shaqeynta naqshadeynta waa in laga saaro kor ka sii deynta kaydka adag ee malab, qaadashada qaabka leh, taas oo kicinaysa shinnida si loo soo celiyo tirada lumay, iyaga oo ujeeddadan ujeeddo cusub oo madhan.
Goobo shinni ah ayaa jiilaalka qaboobi kara hal dhisme, cabbiraha rugta ayaa u oggolaanaya. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha jiilaalka muddada dheer, shinni u baahan tahay in la quudiyo, maadaama ay cunaan sahaydooda. Iyadoo loo eegayo fududeynta isticmaalka rugta, dhibaatadu waa mid loo dulqaadan karo.
Ma taqaanaa? Gumeysiga shinni wuxuu u baahan yahay qiyaastii 250 kiilo oo malab ah si uu u quudiyo sanad walba. Marka aysan ku filneyn, beeska shaqeeya, naftooda oo naftooda wax u bixiya, u dhintaan ka hor inta aysan yareyn in ay noqoto mid culus iyo ilmo-galeenka ayaa waxyeello gaarsiisan.
Isticmaalka jiritaanku waxaa lagu siiyaa hab ku habboon inta lagu jiro ururinta malab dhexdhexaad ah iyadoo la adeegsanayo dukaamada, iyo sidoo kale inta lagu jiro laaluush wanaagsan, iyadoo la rakibayo qaybaha u dhigma jirka jirka ku jira.
Dadan waxay leedahay qiyaasta caadiga ah: 450 x 450. Darbiyadu waxay ka sameysan yihiin 37-milimitar boorsooyin marka laga reebo podshnishnika iyo saqafka. Muuqaal ahaan sawirada dibedda, naqshadiisu waxay leedahay cabbir 524 x 524.
Noocyada kala duwan ee dadka da'da yar ee tirooyinka. Waqtiyada Soofiyeetiga, waxay ahaayeen kuwa ugu badan guud ahaan Ururka.
Dhammaan noocyada moodooyinka dhirta ayaa si weyn loo isticmaalaa, wax soo saarkooda waa la cusbooneysiiyaa iyo marka loo baahdo. Kuwa ugu caansan waa tobankii iyo laba iyo toban kala wareega.
Waxay ganacsi ahaan diyaar u yihiin oo ay fududahay in la soo saaro. Beekeeper hiwaayad ah ayaa awood u leh in ay gacan ka dhigaan gacmihiisa ka dib markii farsamada barashada.
Ma taqaanaa? Waxay ka soo baxaysaa lafil ilmo-galeenka ama shinni shaqo, waxay ku xiran tahay cuntada. Qayb ka mid ah qaabka quudinta ayaa u oggolaanaya xubnaha taranka in ay ku dhacaan ilmo-galeenka mustaqbalka.
Kalluunka waxaa la siiyaa 10-qaab oo ka yar miisaanka 12-jir "shaqaale". Ahaansho, wuxuu u eg yahay rugta rutovsky. Tani waa run loogu talagalay beekeepers oo ka shaqeynaya naqshado kala duwan oo isku mid ah. Sidaas daraadeed, labada nidaamku waxay leeyihiin waxyaabo isku mid ah oo is-beddel ah. Waxaan ka hadleynaa saqafyada, hoosta, dukaamada, qaybta madow. Qaybo yaryar oo aan la isticmaalin - meelo badan oo lagu keydiyo ayaa loo baahan yahay.
Sawirada sawirayaasha 12-iyo 10-jir ayaa ku dhowaad isku midka ah, marka laga reebo cabbirka gadaasha iyo darbiyada hore ee kiiska, iyo sidoo kale dukaanka. Waxaa jira fikrad ah in tani ay tahay rugta rutovsky wax ka beddelay qaabka Dadanov. Dhamaan naqshadaha waxay leeyihiin walxo caadi ah oo muhiim ah - qaab, xajmiga dukaanka qayb ahaan ayaa laga soo gaabin karaa min 300 ilaa 145 millimitir.
Dada 10 geesood waxay leedahay mugga yar, taas oo sahlaysa, sidaas darteedna mobile badan. Way ku habboon tahay in loo isticmaalo miyiga, gaar ahaan halka uu jiro laaluush yar, tusaale ahaan, marka ay u socdaan buuraha si ay u aruursadaan malab cows.
Beehive la siiyay 12 muraayad inta badan dalbaday beekeepers. Waa kiis keli ah oo leh dukaamo badan oo dukaamo ah, saqafka, saxan saqaf ah iyo hoos - dhegoolaha ama lagama jari karo. Xakamaynta jidhka iyo dheellitirka waxaa lagu dabaqayaa laab. Kiisku wuxuu heystaa 12 shuruudood oo cabbir ah oo cabbirkiisu yahay 435 x 300 millimitir. Dakhliga dheeraadka ah ee dukaanku wuxuu heystaa nus dhan nus ah 435 x 145 milimitir. Weli waxaa weli jira labo diaphragms.
Gudaha waa inay u hoggaansamaan cabbirka caadiga, dibedda (ku xiran tahay dhumucda kuraasta) waxay ku kala duwanaan kartaa cabbirka.
Honey waa mid aad uga fog qiimaha kaliya ee qofku u helo mammillada. Waxyaabaha kaydsiga ah sida manka, shinni shinni, wax, propolis, podmor, caanaha drones ayaa sidoo kale la isticmaalay.
Waxaa jira dad jecel alaabta gacanta laga sameeyo si loogu iibsado naqshado. Kuwani waa ra'yiga dhabta ah, jecel shaqadooda, waxay qadarinayaan waxa ay haystaan ​​waxayna diyaar u yihiin inay hagaajiyaan wax walba sida ugu wanaagsan ee awooddooda.
Samaynta rugta xayawaanku kuma adkaato xirfadahan. Waxaa loo baahan yahay qalab, qalab, gacmo iyo waxyaabo dhiiri gelin ah.
Ma taqaanaa? Qeyb kasta waxay leedahay urta qof waliba, walxahaas, sida furaha, dukaanka shinni ee qaybta loo yaqaan ee jirka oo u keena ilaalada marka uu yimaado. Waa wax aan suurtogal ahayn in shinbir leh ur aan caadi aheyn in ay gasho guriga.
Nolosha guriga ee beesku waa inaanay ka yaraan toban sano. Waa suurtogal in la dheereeyo adoo raacaya xeerarka:
Isticmaalka qalabka tayada;
Kaafinta habboon iyo isu-geynta qaybo;
Marxaladda (hal mar 2-3 sano) midabaynta xayawaanka noolaha.
Noocyada dhirta waa inay noqdaan iftiin, maaddadu waa qalalan oo tayo sare leh.
Qalab ku haboon waxaa laga helaa kuwa soo socda:
Waxay door bidaan in ay ku taliyaan lini, sir, macaan.
Qoryaha waa in la qalajiyaa, qoyaanku waa in aan ka badneyn 15%, waa in uu ahaadaa mid toosan, aan lahayn dufan, dildilaacyo iyo guduudasho, iyadoon doorbid lahayn knot.
Waa muhiim! Haddii jiritaanka xirmo aan la iska ilaalin karin, waa inay ahaato ugu yaraan yar, caafimaad leh, si adag u dhejisid qoryaha oo aan ku yaallo dhinaca geeska. Waa in la xirxiraa leexasho ama meel ka baxsan waa in la soo saaraa, si adag u xirxiray adoo isticmaalaya xabagta aan biyaha lahayn. Cork laga sameeyey alwaax isku mid ah.
Waxa aad u baahan tahay samaynta qaabka iyo rugta
Wixii qaabdhismeedka aad u baahan tahay inaad diyaariso:
Xadhig bir ah;
Suufiyeyaasha iyo ciddiyaha;
Saameyn qashin qubka qallalan.
Si aad u samayso rugta, waxaad u baahan doontaa:
Cuntada loo xiro;
Ciddiyo yar yar;
Talaabo talaabo tallaabo ah
In aad haysato ujeedo inaad ku dhisto rugta gacmahaaga, waa inaad soo qaadataa sawirada, tanina waa dhismo heer caadi ah, guusha dhacdada waxay ku xirnaan doontaa cabbirka.
Dhismuhu wuxuu leeyahay qiyaaso isku mid ah oo loogu talagalay dhammaan finaha dhirta Dadanovsky - 435 x 300 millimitir.
Dufanka qalalan ee la gooyey waa in lagu xiro iyadoo la isticmaalayo ciddiyaha ama koolada. Iyada oo laga caawinayo dharka, samee godadka dhinaca dhinacyada si ay u xoqdo silig.
Ku dhaji xarigga iyaga oo isticmaalaya iyaga, iyaga oo wadajir ah isticmaalaya adigoo isticmaalaya boorsada iyo awl.
Iska yaree daloolka daloolka ugu dambeeya, xaji siligga.
Ka saar xad-dhaafka caanaha.
Shaxda waxaa loo isticmaali karaa ka dib qaabsocodka xayawaanka.
In la soo saaro rugta, waa inaad si taxadar leh u fiirisaa cabbirada lagu muujiyay sawirka. Qeybta kore ee xarunta waxaa ku yaal 10 x 12 cm oo kaamil ah, oo horey u jirey diyaarad duulimaad oo 4-5 cm ah. Goobta hoose waxaa la siinayaa boorsada iyo gawaarida duulimaadka.
Mashiinka si loo dhiso qoryaha, jarjar, gogosha - 37-40 millimitir;
Iska yaree geesaha u xirxirida derbiyada;
Iska yaree jubbadaha 18x4 mm;
Ka samee gaashaan iyaga oo isticmaalaya jilbaha iyo keligood;
Isku duwo kiiska, adoo ku dhejinaya koolada iyo ciddiyaha;
Soo saar sannadaha;
Samee dhowr hawo oo hawo ah oo ah 1.4 cm dhexroor;
Saqafku wuxuu ka samaysan yahay guddi 15mm ah ka dibna ka dib marka la dhamaystiro shaqada waxaa lagu daaweeyaa lakabyo biyo ah.
Dhinaca saqafka ah, sidoo kale, daadi dhawr godad.
Ma taqaanaa? Waxaa la rumaysan yahay in beesku siinayo doorasho ah buluug, buluug, hurdi iyo cagaaran, laakiin naxariis daro ayaa lagu go'aamiyaa maaha mid midabkiisu badan yahay iyada oo ay joogaan jiritaanka manka iyo nectar.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada naqshadeynta
La shaqaynta rugta dadanovsky waxay leedahay sifooyin gaar ah, qaar ka mid ah, xaaladaha kala duwan, waxaa loo aaneyn karaa labada faa'iido iyo faa'iido daro.
Waxay leedahay cabbir cufan ah, taas oo, si kastaba ha ahaatee, waxay u fiicantahay ururinta reer miyiga ah ee malabku. Ka qaadida saqafka iyo duufka sare ee shabaqa, waxay ku habboon tahay in lagu rido xuddulubyadaas laba saf oo ka sarreeya kan kale, beddelida baararka wareegga hawada iyo, dabcan, si taxadar leh u xaqiijin.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in guryaha uu ku xiran yahay hoose, rugta ayaa leh dhismo adag.
Miyuu leeyahay miisaan ku filan jiilaalka.
Waxay leedahay wax yar oo ka hooseeya marka ay boodaan marka la barbardhigo moodooyinka hareeraha.
Beerjirayaasha jecel waxay si habboon u xakameyn karaan nolosha qoyska shinni ah waxayna ka jawaabaan baahidooda marka ay la shaqeynayaan muraayadaha, halka shaqada korontadu ay leedahay wax soo saar weyn, laakiin ma leh hab gaar ah.
Qaar ka mid ah sheyga 12-jir ah ayaa magdhow la siiyaa iyadoo jiritaanka 10-jir, haddii loo baahdo.
Iyadoo loo eegayo shaqada joogtada ah ee 12-jir ah, qaabsocodka diidmada waa la joojiyey.
Way adagtahay in la siiyo shinni jadwalka jiilaalka, gebi ahaanba laga buuxiyey malab, badanaa waa inay bixiyaan qayb ahaan buuxsantay.
Xoogaa yar laba deegaan shinni ah.
Si loo abuuro shuruudaha ugu fiican ee bees si loo abuuro oo loo abuuro malab delicious, akhri sidoo kale sida loo sameeyo beehive leh gacmahaaga.
Nooc kasta oo ka mid ah rugta ayaa leh waxyaabo fiican oo soo jiidatay kuwa jecel, iyo faa'iido daro ay tahay inaad la gasho. Qaybta Dadan-Blatt waxay ku qancineysaa baahida loo qabo cunug yar oo qalafsan, fududahay in lagu hayo xitaa hal qof waxayna kuu ogolaaneysaa inaad la socotid qoyskaaga shinni, iyada oo buuxineysa maqnaanshaha. Doorashadan ma ahan miisaaniyad warshadeed, halkaas oo ay noqon doonto mid waxtar leh oo aan loo baahnayn waqti aan waxtar lahayn.